प्रेसिडेन्ट सपना - China Radio International
(GMT+08:00) 2018-07-24 10:40:01
कोलम्बो प्लानको छात्रवृत्ति पाएर भारतबाट केमिकल्स इन्जिनियरिङ गरेका दिनेश कण्ठ २०४६ मा गोरखकाली रबर उद्योगमा प्रोडक्स स्टक्चर डिजाइनिङमा काम गर्दथ्ये। जागिर खाएको तीन महिनापछि उनलार्इ अफिसले चीनमा ६ महिनाका लागि तालिममा पठाउने अवसर दियो। अरुका लागि निकै राम्रो अवसर भए पनि उनले तालिमका लागि चीन जाने भनिसक्दा जागिरबाटै राजिनामा दिए।
'हैट चाइना ! न भाषा मिल्छ न संस्कृति ! न खानेकुरा मिल्छ न त धर्म नै ! जहिल्यै पनि नुडल्स खानुपर्ने ! तालिममा जानुभन्दा बरु जागिर नै खाँदिन' भन्दै उनले राजीनामा दिए। हुन त उनले लोकसेवा आयोग दिएर उद्योग विभागका लागि अधिकृत स्तरको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरेका थिए। त्यतिबेला शाखा अधिकृतको तलव १४७० रुपैयाँ थियो। त्यसलार्इ छोडेर उनी गोरखकाली रबर उद्योगमा त्यसको दोब्बर २ हजार ९ सय रुपैयाँको जागिरका खान गएका थिए। गोरखकाली रबर उद्योग छोडेर उनले याक एण्ड यति होटलमा काम सुरु गरे। पाँच तारे होटलमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट (पानी सफा गर्ने विभाग), फुड एण्ड वेभरेज (खाना तथा पेय विभाग), लण्ड्री प्लान्ट (लुगा धुने विभाग) लगायतका क्षेत्रमा केमिकल इन्जिनियर आवश्यक हुन्छ। याक एण्ड यतिमा उनको तलब तलव ५ हजार थियो। त्यहाँ पनि उनले त्यति लामो समय काम गरेनन्। याक एण्ड यतिबाट उनले सोल्टी होटलमा जम्प गरे। सोल्टी होटलमा उनले २०४९ देखि २०५२ सम्म काम गरे। सोल्टी होटलमा काम सुरु गर्दा उनको तलब ८ हजार थियो भने छोड्ने बेलामा १० हजार भइसकेको थियो। उनी हिसाब गर्थे लोकसेवा पास गरेको अधिकृतकोभन्दा ४ गुण बढी भइसकेको थियो। त्यतिबेला अधिकृतको तलव वृद्धि भएर २५ सय पुगेको थियो। सोल्टी र याक एण्ड यति होटलमा काम गर्ने विदेशीको तलव चाहिँ त्यतिबेलै २ हजार अमेरिकी डलर थियो। ती खैरेले एक वर्षमा पाउने तलवजति कमाउन त उनले २० वर्ष काम गर्नुपर्ने रहेछ। उनीहरुको दुर्इ वर्षको पैसा कमाउन ४० वर्ष अर्थात् जीवनकै सबै उर्जाशील समय खर्च गर्नुपर्ने।
त्यतिबेला सोल्टी होटेल इन्टरकन्टिनेन्टल समूहमा थियो। इन्टर कन्टिनेन्टल समूहले चीनको एउटा होटलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन आव्हान गरेको रहेछ। उनले त्यसमा आवेदन दिए। अनि छनोट पनि भए। चीन जानु भन्दा त जागिर नै खाँदिन भनेर राजीनामा दिएका उनै दिनेश त्यसको ६ वर्षपछि २०५२ सालमा चीनको चङचौ सहरमा काम गर्न आए। चीनमा काम थाल्दा नै उनको तलव २ हजार अमेरिकी डलर थियो।
अब उनले पाँच तारे होटलको महाप्रवन्धक हुने सपना देख्न थाले। महाप्रबन्धक बन्नकै लागि उनले २०५७ सालमा अमेरिकाको कोलोनलबाट दुर्इ वर्षको महाप्रवन्धकको कोर्स अध्ययन गरे। एक वर्ष अमेरिकामै बसेर पढे भने अर्को वर्ष चीनमा काम गर्दै स्वअध्ययन गरे। त्यसपछि उनले थाहा पाए चीनमा उनी कार्यरत होटल समूहबाटै पनि महाप्रवन्धकको कोर्स गर्न पाइनेरहेछ। उनले इन्टरकन्टिनेन्टल समूहबाट २०५८ सालमा फेरि महाप्रवन्धकको कोर्स गरे।
केमिकल इन्जिनियर त छँदै थिए त्यसमाथि उनीसँग महाप्रवन्धकको दुर्इदुर्इवटा सर्टिफिकेट प्राप्त भयो। यी दुर्इ पक्षबाट सक्षम व्यक्ति पाँचतारे होटलमा उत्कृष्ट मानिन्छ। उनी २०५९ सालमा चीनको चङचौबाट हाइनान प्रान्तको हाइखोमा सरुवा भए र सहायक महाप्रवन्धक पदमा बढुवा पनि भए। त्यसपछि उनी विभिन्न ठाउँमा काम गर्दै २०६३ सालमा शाङहार्इ पुगेर महाप्रवन्धक भए।
विश्वभरी इन्टर कन्टिनेन्टल समूहमा ५ हजार ५ सय होटलहरु छन्। चीनमा मात्र हजारभन्दा बढी छन्। त्यस्ता विभिन्न होटलमा उनले काम गरेका छन्। नयाँ होटल स्थापना गरेर सफल बनाएका छन् उनले। पछिल्लो समय उनले चीनको हपेइ प्रान्तको सदरमुकाम शच्याच्वाङस्थित होलिडे इन पाँच तारे होटलमा डेढ वर्ष महाप्रवन्धक पद समाल्हे। घाटामा चलिरहेको त्यो होटललार्इ उनले छ महिनामै नाफामा पुर्‍याइदिए। चीनभरि रहेका इन्टरकन्टिनेन्टल समूहका पाँच तारे होटलहरुका महाप्रवन्धकहरुमा उनी उत्कृष्ट भएर अवार्ड पनि प्राप्त गरे। महाप्रवन्धक भएर उनले चीनकै आधा दर्जनजति होटलमा काम गरिसकेका छन्। पहिलोपटक चीनमा काम गर्न आउँदा जेजति चुनौति भोगे अहिले सबै कुरा सहज भएको छ। पहिले भाषाको चुनौति थियो। अहिले उनी फरर्र चिनियाँ बोल्छन्। पहिले उनको जिम्मेवारीमा टार्गेट कसरी पूरा गर्ने भन्ने चुनौति थियो पछिल्लो समय उनले जहाँ जहाँ होटलको नेतृत्व गरे त्यहाँ टार्गेटभन्दा बढी उपलब्धि प्राप्त गरे। उनले जहिल्यै आफूमाथिको फराकिलो आकाश हेरे। त्यही आकाशमा आफ्नो फराकिलो भविष्य हेर्दै चुनौतिलार्इ सामना गर्न तयार भए। काम गर्दै गएपछि सहज परिस्थित हुनासाथ उनी त्यसलार्इ छोडेर चुनौतिको जोनमा प्रवेश गर्न चाहन्छन्। केमिकल इन्जिनियर भएपछिका उनका हेरक जागिरे जीवनले त्यही प्रतिविम्बित गर्दछ।
उत्कृष्ट महाप्रवन्धक भएर पुरस्कृत हुनासाथ उनले इन्टरकन्टिनेन्टल समूह छोडेर अर्को चुनौतिलार्इ स्वीकार गरेका छन्। अहिले उनी अष्ट्रेलियन चेन होटल अर्ज्याल ग्रुपमा प्रवेश गरेका छन्। यसका अहिले चीनमा एक सय पचास होटल छन्। यसमा उनी भाइस प्रेसिडेन्ट अर्थात् दोस्रो उच्च तहमा रहेका छन्। पाँचतारे होटल समूहको चेनमा यो तहमा पुग्ने संभवत: उनी पहिलो नेपाली हुन्। यसभन्दा अगाडि उनी एउटा होटलको महाप्रवन्धक थिए। त्यो होटलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनको काँधमा थियो। अब उनको अन्डरमा एकसय पचास होटलका महाप्रवन्धकहरु छन्। उनले पूरै एकसय पचास होटलको निगरानी गर्नुपर्छ। त्यतिमात्र होइन उनले नयाँ होटल खोल्ने पनि काम गर्नुपर्छ। उनले चीन र दक्षिण एसियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएका छन्।
अहिले उनको मुख्य कार्यालय बेइजिङमा छ। दोस्रो कार्यालय क्वाङ्चौ र तेस्रो कार्यालय शाङहार्इमा छ। उनी ४० प्रतिशत मात्र कार्यालयमा रहन्छन्। ६० प्रतिशत समय त विभिन्न क्षेत्रका होटलको अनुगमन र नयाँ होटल खोल्नका लागि फिल्डमै बित्ने गर्छ। बुटिक र स्मार्ट होटलका चार तारे र पाँच तारे होटल भएको अर्ज्याल समूहले नेपालमा पनि होटल खोल्न चासो राखेको छ। दिनेश अहिले पोखरा, लुम्बिनी, चितवन र नगरकोट लगायतका चिनियाँ पर्यटकका लागि लोकप्रिय ठाउँमा होटल खोल्ने प्रयास गर्दै छन्। उनको अनुभवमा नेपालमा महङ्गा चिनियाँ पर्यटक गएकै छैनन्। मध्यम वर्गका केही र निम्न वर्गका चिनियाँ पर्यटक मात्र नेपाल जान्छन्। चिनियाँको मानिसकता बुझेर विशाली पर्यटकका लागि त्यही अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदा चिनियाँ पर्यटकले दैनिक २ हजार डलर सजिलै तिर्नसक्ने उनको अनुभव छ। त्यसकारण उनी चिनियाँ ब्राण्डको लग्जरिज होटल नेपालमा प्रवेश गराउने ध्याउन्नमा लागेका छन्। चिनियाँलार्इ राम्रो खानुपर्छ त्यसमा पनि चिनियाँ खानेकुरा नै चाहिन्छ। अहिले पनि नेपालका अधिकांश चिनियाँ रेष्टुरेन्टमा उत्कृष्ट चिनियाँ खाना नभएको उनको अनुभव छ। पाँचतारे होटलमै भएका चिनियाँ रेष्टुरेन्टले पनि चिनियाँलार्इ आकर्षित गर्न नसकेको उनले बताए। सुरुमा एकदुर्इ होटल खोलेपछि चीनबाटै जनशक्ति लानुपर्ने र पछि त्यही होटलबाट तालिम दिन सकिने उनी बताउँछन्। चीनको तुलनामा नेपालमा होटल चलाउन केही जटिलता रहेको उनी सुनाउँछन्। उनी भन्छन् 'चीनमा राजनीति र युनियनसँग कुनै चासो हुँदैन। हरेक कर्मचारीले समयको पूरै पालन गर्दछन्। काममा दत्तचित्त भएर काम गर्दछन्।'
नेपालमा राम्रो होटल खोलेर पर्यटन सेवा गर्ने सोचाइ राखेका दिनेश कण्ठको सपना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल समूहको प्रेसिडेन्ट बन्ने रहेको छ। उनी भन्छन् 'पहिले चाइना जानेभन्दा जागिरबाटै राजीनामा दिएँ, अहिले यही चाइनाले सफलताको सिँडी चढायो। चीन बस्ताबस्तै अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलको प्रेसिडेन्ट बन्ने लक्ष्य छ।'
साभारः कान्तिपुर कोसेली। २०७५ असार २३ (२०१८ जुलाई ७) शनिबार।